စစ္ပြဲက အျပန္ေျခတစ္ဖက္ပ်က္၍ ခ်စ္သူေကာင္မေလးမွ လက္မထပ္ေတာ့ဘဲ စြန္႔ပစ္ခံရတဲ႔ ဗုိလ္ေလာင္းတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ (သုိ့မဟုတ္) မုသားေတာင္ထိပ္မွ လိမ့္က်ခဲ႔သူ – Thutastar
စစ္ပြဲက အျပန္ေျခတစ္ဖက္ပ်က္၍ ခ်စ္သူေကာင္မေလးမွ လက္မထပ္ေတာ့ဘဲ စြန္႔ပစ္ခံရတဲ႔ ဗုိလ္ေလာင္းတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ (သုိ့မဟုတ္) မုသားေတာင္ထိပ္မွ လိမ့္က်ခဲ႔သူ
Comments Off on စစ္ပြဲက အျပန္ေျခတစ္ဖက္ပ်က္၍ ခ်စ္သူေကာင္မေလးမွ လက္မထပ္ေတာ့ဘဲ စြန္႔ပစ္ခံရတဲ႔ ဗုိလ္ေလာင္းတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ (သုိ့မဟုတ္) မုသားေတာင္ထိပ္မွ လိမ့္က်ခဲ႔သူ
ေမာင္ေရ ခ်စ္ ေမာင့္ ကိုလာႀကိဳတာ ကား ေပၚတက္ ေမာင္စိတ္တိုင္းက် ဆိုင္မွာစားမယ္ေမာင္ ဘာစား ဘယ္သြား ဘာဝယ္ခ်င္းတုန္းေျပာခ်စ္ အကုန္လုပ္ေပးမယ္
တခါတခါ သူ႔ကိုယ့္သူ “ေမာင္ခ် စ္ ကေတာ္ ရုပ္ေပါက္ရဲ႕လား ခ္ခ္”လို႔ ေမးေမးေနေတာ့ မနားတမ္း ေျဖေျဖေပးရတာအေမာရုပ္ကလည္း ညိဳသေလာက္ ေခ်ာတာကိုးသူက က်ြန္ေတာ့္ရဲ႕တစ္ဦးတည္းေသာ ခ်စ္သူေပါ့ခ်စ္သူဆိုေပမယ့္တခါတခါ သူဟာ အရွင္သခင္တခါတခါ သူဟာ မိခင္တခါတခါ သူဟာ မိတ္ေဆြတခါတခါက်ေတာ့လည္း က်ြန္ေတာ့္ဘဝကို ရွယ္ယာအမ်ားဆံုးထည့္ထားတဲ့ရွယ္ယာပိုင္ရွင္လို ပံုစံမ်ိဳးသူဆိုးပါေစေလ ကိုကခ်စ္တာကိုး
ေစ့စပ္ပြဲျပီးလို႔ မၾကာလွပါဘူး တပ္မေတာ္ သားဘဝ မင္းခ ေယာက်ား ကမ္းနားသစ္ပင္ေလက်ြန္ေတာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္ကို ေရွ႕တန္းပါပါေလေရာဒီတစ္ႀကိမ္တိုက္ပြဲဟာ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုလံုးအခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာက်ားကုတ္က်ားခဲ တိုက္ရတဲ႔ တိုက္ပြဲက်ြန္ေတာ္ အားခဲျပီး တိုက္တယ္ ထပ္တိုက္တယ္အျပန္မွာ ကုိယ့္မိဘေရာ ကိုယ္ခ်စ္တဲ႔သူနဲ႔ပါ ေတြ႕ရမွာပဲေလေပေပေတေတ တိုက္ရက်ိဳးလည္းနပ္ပါေပ့
ဒါေပမယ့္ဇနီးျဖစ္သူကမျငဴမစူမယားဝတၱယားဟူ၍ မျပတ္ သစၥာတရားေတြနဲ႔ အသက္ဆက္ခဲ႔တာ ခုခ်ိန္ထိပါပဲေတာ္ပါေသးရဲ႕ က်ြန္ေတာ့္မွာ အျမင္မပ်က္မယြင္းရွိေနေသးလို႔က်ြန္ေတာ္ ေပ်ာ္လိုက္တာ
သူမအေျဖက ရွင္းပါသည္ ရွင့္မွာ ေစ႔စပ္တုန္းက အေကာင္းျပန္လာေတာ့ ေျခတစ္ဖက္ပါမလာလို႔တဲ႔ဗ်ာ“ေတာက္” ရက္စက္လိုက္တာ ဧကရီရယ္
ဗိုလ္ေလာင္း ဘဝကတည္းက ေက်ာင္းေရွ႕ထိ ဗိုလ္ေလာင္းေဆာင္ထဲ တေရြ႕ေရြ႕ဝင္ေနတဲ႔က်ြန္ေတာ့္အရိပ္ေပ်ာက္တဲ့အထိမ်က္ေတာင္မခတ္တမ္း ေငးဆဲ ေတြးဆဲ သည္းသည္းလွဳပ္ခ်စ္ျပခဲ႔ေတာ့လည္းသူပါပဲကားႀကီးကားငယ္ေတြနဲ႔ လာႀကိဳက်ြန္ေတာ့္လို ေတာသားအရိုင္းေလးကိုကပိုယလိုခ်စ္ျပခဲ႔တာလည္းသူပါပဲ
” ငါ ” သာမက “ငါနွင့္စပ္ဆိုင္သမွ် အရာအားလံုး”ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပာက်ေစနိုင္သည္ကိုေတာ့ ဧကရီ အပါအဝင္ မိန္းမသား မ်ားအားလံုး သိေစခ်င္လြန္းလွသည္ေတာ့အမွန္
Credit: မင္းေသြးငယ္(ရာမညေျမ)Soe Thura
မှတ်မိပါသေးသည်။ကျွန်တော် စစ် တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း ဘဝကျွန်တော် တစ်ပတ်တစ်ခါOutpass ထွက်ချိန်ဧည့်တွေ့ချိန်များဆိုသူမက အိမ်ကပိုင်သမျBrand New ကားကြီးကားငယ် အသွယ်သွယ်နဲ့ကျွန်တော့်ကို လာကြိုနေကျ ဒေါက်မြင့်လေးတကြွကြွနဲ့အိတင်းကျစ်ထုံးနေအောင် စေ့ထားတဲ့ နှင်းဆီရောင်နှုတ်ခမ်းလွှာ ၂ ခုကြားကထွက်ထွက်လာတတ်တဲ့အသံ
မောင်ရေ ချစ် မောင့် ကိုလာကြိုတာ ကား ပေါ်တက် မောင်စိတ်တိုင်းကျ ဆိုင်မှာစားမယ်မောင် ဘာစား ဘယ်သွား ဘာဝယ်ချင်းတုန်းပြောချစ် အကုန်လုပ်ပေးမယ်
တစ်ခုတော့ရှိတယ် ချစ်နဲ့ မောင် တို့ ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ခွဲကြေးနော်တဲ့“အေးပါကွ ချစ်ရ”ဟု ကျွန်တော်ကဆိုတော့မောင်က ယောကျား ယောကျားထဲက စစ်သား မောင့် ကတိတည်ပါစေနော်တဲ့တစ်မောင်တည်း မောင်နေတတ်တဲ့ သူမထက်ကျွန်တော့်၏ ဆင်းရဲသားကျောမွဲဘဝကိုစာနာတတ်သည့် သူမကို ကျွန်တော်ပို၍ တန်ဖိုး ထားသည်။ လေးစားသည်။ချစ်ခင်သည်။
သူ့နာမည်က ဧကရီ မမ အများကြားမှာတော့ အာဏာရဘုရင်မပေါ့ကျွန်တော်ကျမှ အရည်ပျော်ကျတယ်ဆိုပဲပြီးတော့ သူ့ဝသီလေးတစ်ခုကဗိုလ်ကတော်ရူး သိပ်ရူးတာရူးပေါ့ ဧကရီ ရယ် ဧကရီ က မိန်းမသား ပဲပြီးတော့ အများနဲ့မတူ တမူထူးတဲ့အလှပိုင်ရှင်ကိုး
တခါတခါ သူ့ကိုယ့်သူ “မောင်ချ စ် ကတော် ရုပ်ပေါက်ရဲ့လား ခ်ခ်”လို့ မေးမေးနေတော့ မနားတမ်း ဖြေဖြေပေးရတာအမောရုပ်ကလည်း ညိုသလောက် ချောတာကိုးသူက ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသော ချစ်သူပေါ့ချစ်သူဆိုပေမယ့်တခါတခါ သူဟာ အရှင်သခင်တခါတခါ သူဟာ မိခင်တခါတခါ သူဟာ မိတ်ဆွေတခါတခါကျတော့လည်း ကျွန်တော့်ဘဝကို ရှယ်ယာအများဆုံးထည့်ထားတဲ့ရှယ်ယာပိုင်ရှင်လို ပုံစံမျိုးသူဆိုးပါစေလေ ကိုကချစ်တာကိုး
ကျောင်းဆင်းပြီး မကြာမီ သူချစ်ကိုယ်ချစ် နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတဘဝ ထူထောင်ရမှာဆိုတော့ ကျွန်တော် ပျော်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ သူနဲ့ကျွန်တော် အေးမြတဲ့ဆောင်းရက်လေးတစ်ရက် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရွေး မင်္ဂလာ နံနက်ခင်းလေးပေါ့မြန်မာပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးဟိုတယ်တစ်ခုမှာ သူ့စိတ်တိုင်းကျ ကျကျနန တခမ်းတနားစေ့စပ်ခဲ့ပါတယ်
စေ့စပ်ပွဲပြီးလို့ မကြာလှပါဘူး တပ်မတော် သားဘဝ မင်းခ ယောကျား ကမ်းနားသစ်ပင်လေကျွန်တော် ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကို ရှေ့တန်းပါပါလေရောဒီတစ်ကြိမ်တိုက်ပွဲဟာ စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးအချိန်တော်တော်ကြာကျားကုတ်ကျားခဲ တိုက်ရတဲ့ တိုက်ပွဲကျွန်တော် အားခဲပြီး တိုက်တယ် ထပ်တိုက်တယ်အပြန်မှာ ကိုယ့်မိဘရော ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ပါ တွေ့ရမှာပဲလေပေပေတေတေ တိုက်ရကျိုးလည်းနပ်ပါပေ့
ရှေ့တန်းပြန်ချိန်ဆိုတာအသက်ပါချင်လည်းပါမယ်ပါချင်မှလည်းပါမယ်ဖျားနာကျိုးကန်းလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့က ကံကြမ္မာကို ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးရွေးခွင့်ဆိုလိ့ု တိုးတိုးဖော်ပဲရှိတယ်မကြာသေးမီက Gun Shot နဲ့ မျက်လုံး နှစ်ဖက်လုံးကွယ်ရှာလို့ ဆေးပင်စင်ယူသွားရတဲ့ အရာရှိတစ်ယောက်ဆို အရမ်းသနားဖို့ကောင်းတယ်
ဒါပေမယ့်ဇနီးဖြစ်သူကမငြူမစူမယားဝတ္တယားဟူ၍ မပြတ် သစ္စာတရားတွေနဲ့ အသက်ဆက်ခဲ့တာ ခုချိန်ထိပါပဲတော်ပါသေးရဲ့ ကျွန်တော့်မှာ အမြင်မပျက်မယွင်းရှိနေသေးလို့ကျွန်တော် ပျော်လိုက်တာ
သူမအဖြေက ရှင်းပါသည် ရှင့်မှာ စေ့စပ်တုန်းက အကောင်းပြန်လာတော့ ခြေတစ်ဖက်ပါမလာလို့တဲ့ဗျာ“တောက်” ရက်စက်လိုက်တာ ဧကရီရယ်
ဗိုလ်လောင်း ဘဝကတည်းက ကျောင်းရှေ့ထိ ဗိုလ်လောင်းဆောင်ထဲ တရွေ့ရွေ့ဝင်နေတဲ့ကျွန်တော့်အရိပ်ပျောက်တဲ့အထိမျက်တောင်မခတ်တမ်း ငေးဆဲ တွေးဆဲ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ပြခဲ့တော့လည်းသူပါပဲကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ လာကြိုကျွန်တော့်လို တောသားအရိုင်းလေးကိုကပိုယလိုချစ်ပြခဲ့တာလည်းသူပါပဲ
ရွွာက စိတ်နာနာနဲ့ထွက်ပညာကို မာနထက်ထက်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ငါဒါတွေကိုပစ်ပြီး မင်းကိုချစ်မိခဲ့တာကွမင်းသာ ငါ့ကိုအသေမုန်းနေခုဆို ရွာက ငါ့ဆွေမျိုးမိဘငါ့ အသက်ပြန်ပါလာမယ့်အချိန်တယုတယ အားခဲပြီးစောင့်နေကြတုန်းမြေးချီချင်လှတဲ့ အသက် ၅၀ ကျော်ငါ့အမေအိုကို ငါဘယ်လိုပြောရမလဲ
ဒီမှာ ဧကရီ လူဆိုတာ ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိတယ်ငါဟာ မင်းသုံးပြီး နည်းနည်းလေး တိုန သွားတာနဲ့ အမှိုက်ပုံးထဲ ပစ်ပစ်ထားတတ်တဲ့ မင်းရဲ့တစ်ခါသုံးနှင်းဆီရောင် နှုတ်ခမ်းနီတောင့်မဟုတ်ဘူးဆော့ချင်တိုင်းဆော့ အားကုန်တော့ ကြုံရာနေရာမှာ ပစ်ချင်တိုင်းပစ်ထားလို့ရတဲ့ သံပတ်ပေးအရုပ်တစ်ရုပ်မဟုတ်ဘူး
ရွှ့ံစေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ချိုးရုပ်လေးတွေတောင်တကူကူးနဲ့ အော်တတ်သေးတာပဲငါဟာ ခံစားတတ်တဲ့ သွေးသားနဲ့လူသားနှလုံးသားပိုင်ရှင်ပါ
တကယ်တော့ ဧကရီမင်းဟာ ငါ့ကို လက်ထပ်ချင်တာမှမဟုတ်ဘဲငါ့ပုခုုံးပေါ်က အပွင့်တွေငါ့ကိုယ်လက်အဂါင်္တွေနဲ့ပဲလက်ထပ်ချင်ခဲ့တဲ့သူပဲဝဋ်ကြွေးရှိရင် ကျေပါစေတော့ ဧကရီ
သြော် လောက လောက
ဤလောကတွင် ဧကရီ့လို မိန်းကလေး မျိုး
” ငါ ” သာမက “ငါနှင့်စပ်ဆိုင်သမျှ အရာအားလုံး”ကို အကြိမ်ကြိမ် ပြာကျစေနိုင်သည်ကိုတော့ ဧကရီ အပါအဝင် မိန်းမသား များအားလုံး သိစေချင်လွန်းလှသည်တော့အမှန်
မှတ်ချက်။ ။ဤဖြစ်ရပ်သည် နယ်မြို့လေးတစ်မြို့တွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ပါသည် ်သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ဖို့တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါ၏
(ကောင်လေးပုံကို ကာယကံရှင်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ ကိုယ်တိုင် ကြည်ဖြူစွာခွင့်ပြု၍ တင်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ကောင်မလေး ပုံကတော့ ကျင့်ဝတ်(Ethic)အရ ပုံလွှဲထားပါကြောင်း)
Credit: မင်းသွေးငယ်(ရာမညမြေ)Soe Thura
ဇနီးသည္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းကို သေဘာက်မိတဲ့ခင္ပြန္းသည္နဲ့ သူတို႔ သံုးေယာက္ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး
Comments Off on ဇနီးသည္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းကို သေဘာက်မိတဲ့ခင္ပြန္းသည္နဲ့ သူတို႔ သံုးေယာက္ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး
ေစာက္ဆင့္မရွိတဲ့ေယာက်ာ္း တို့ရဲ့ အခ်စ္
Comments Off on ေစာက္ဆင့္မရွိတဲ့ေယာက်ာ္း တို့ရဲ့ အခ်စ္
KTV ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္””
အေမ့နဲ႔ ခြံ႔ေကြ်းတဲ့ ထမင္းလုပ္ေတြ စားေကာင္းရင္ အေဖ့ လက္ကေလးကိုလည္း မေမ့ၾကပါနဲ႔
Comments Off on အေမ့နဲ႔ ခြံ႔ေကြ်းတဲ့ ထမင္းလုပ္ေတြ စားေကာင္းရင္ အေဖ့ လက္ကေလးကိုလည္း မေမ့ၾကပါနဲ႔
(၁၆)ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ေသးတဲ့ ညီမေလး၊ ကေလးေလးလို ကစားလို႔ ေကာင္းတုန္း အရြယ္ေလး ေရတိမ္နစ္ၿပီ
Comments Off on (၁၆)ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ေသးတဲ့ ညီမေလး၊ ကေလးေလးလို ကစားလို႔ ေကာင္းတုန္း အရြယ္ေလး ေရတိမ္နစ္ၿပီ
စံုတြဲမ်ား တည္းခိုသြားစဥ္ ကိုယ္ဝန္ရခဲ့ပါက ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အခမဲ့တည္းခိုခြင့္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ ဟိုတယ္ေတြ
Comments Off on စံုတြဲမ်ား တည္းခိုသြားစဥ္ ကိုယ္ဝန္ရခဲ့ပါက ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အခမဲ့တည္းခိုခြင့္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ ဟိုတယ္ေတြ
ဇနီးေမာင္ႏွံစံုတြဲေတြ ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းကို ရပ္တန္႔သြားေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း (၅)ခ်က္
Comments Off on ဇနီးေမာင္ႏွံစံုတြဲေတြ ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းကို ရပ္တန္႔သြားေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း (၅)ခ်က္
ရင္ထဲမွာ တကယ္ စို႔နင့္သြားေစတဲ့ ပို႔ေလးပါ..။ အေဖ့အေကာင့္ေလး မီးမစိမ္းေတာ့ပါ..တဲ့…
Comments Off on ရင္ထဲမွာ တကယ္ စို႔နင့္သြားေစတဲ့ ပို႔ေလးပါ..။ အေဖ့အေကာင့္ေလး မီးမစိမ္းေတာ့ပါ..တဲ့…
မိန္းကေ လး သေဘာ က် မယ္ လို႔ အထင္ မွား တတ္ သည့္ အ ခ်က္ မ်ား
Comments Off on မိန္းကေ လး သေဘာ က် မယ္ လို႔ အထင္ မွား တတ္ သည့္ အ ခ်က္ မ်ား
သားထံက ေငြလွမ္းေတာင္းတဲ့ စာေလးရယ္၊ ေငြေလးသိန္းေက်ာ္ရယ္ အေပါင္စာရြက္ေလးရယ္..ဆိုေတာ့
Comments Off on သားထံက ေငြလွမ္းေတာင္းတဲ့ စာေလးရယ္၊ ေငြေလးသိန္းေက်ာ္ရယ္ အေပါင္စာရြက္ေလးရယ္..ဆိုေတာ့
Comments Off on ကြ်န္မစိတ္ေကာက္ျပီး ရစ္တယ္ဆိုတာ ရွင့္ကို တကယ္ခ်စ္လို႔ပါ
ယုတ္မာသူတစ္ဦးအတြက္ လမ္းေဘးေၾကာ္ျငာ… Credit.. Emc Little. A K
Comments Off on ယုတ္မာသူတစ္ဦးအတြက္ လမ္းေဘးေၾကာ္ျငာ… Credit.. Emc Little. A K
ႏိုင္ငံေက်ာ္ မင္းသမီးေလး တစ္ေယာက္နဲ႔ အတူ အိပ္ခြင့္ရသူ